Macallin Ole Gunnar Solskjær iyo Kooxda Man United oo xilli ciyaareedka soo socda soo wata lix ciyaaryahan oo tayo sare leh – Gool FM
(Manchester) 22 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ee waddanka Ingiriiska oo isku diyaarinaysa xilli ciyaareedka soo socda ayaa la soo sheegayaa inay la soo wareegeyso ciyaartoy tayo sare leh.
Wareyska Daily Mail ee ka soo baxa dalka ayaa daabacay in Macallin Ole Gunnar Solskjær iyo kooxdiisa Manchester United ay xilli ciyaareedka soo socda ay soo wataan lix ciyaartooy oo aad u tayo sarreeya si kooxda dhiig cusub loogu shubo.
Man United ayay ka liidataa xilli ciyaareedkan oo aan qaab ciyaareed wanaagsan ku jirin waxaana lixda ciyaartooy ee uu dalbanayo macallin Solskjaer ay kala yihiin;-
>- Rice Declan oo u dheela kooxda West Ham United, kaasoo ku qiimeysan 50 milyan oo giniga istarliinka ah.
>- Saul Niguez oo ka tirsan kooxda Atletico Madrid ee ka dhisan dalka Spain, waxa uuna joogaa qiimo dhan 128 milyan oo gini.
>- Jao Felix waa laacib 19-sano jir ah oo u ciyaara Naadiga Benfica, waxaana lagu iibsan karaa 105 milyan oo gini.
>- Aaron Wan-Bissaka laacibakn qiimaha uu joogo waa 40 milyan oo gini, waana 21-sano jir u dhashay Ingiriiska oo u dheela kooxda Crystal Palace
>- Callum Hudson Odoi oo ah ciyaaryahan 18-sano jir ah oo u dhashay Ingiriiska iyo Ghana, una safta kooxda Chelsea, waxaana lagu heli karaa 50 milyan oo gini.
>- Bruno Fernandes waxa uu ku qiimeysan yahay 86 milyan oo giniga istarliinka ah, waxaana uu u ciyaraa kooxda Sporting Lisbon ee Waddanka Bortuqiiska.